Enweghị mmata na-etinye Nazca n'ihe egwu | Akụkọ Njem
Enweghị mmata na-etinye Nazca n'ihe egwu
Maria | | Noticias, Peru
Na Peru, n’agbata obodo Nazca na Palpa, otu n’ime ihe omimi ochie a ma ama n’oge niile dị. N'ime ọzara a enwere otu gigantic geoglyphs naanị anya site na ụfọdụ dị elu, nke na-etolite anụmanụ, mmadụ na geometric ọgụgụ. Ọ bụ ọdịnala Nazca kere ha n'etiti 200 BC na 600 AD na ebe ndị ọkà mmụta ihe ochie malitere ịmụ ha na XNUMXs, ọtụtụ echiche banyere mmalite ha na ihe ha pụtara apụta, ọ bụ ezie na ha ka bụ ihe omimi.
Usoro Nazca bụ akụ mba maka Peru ma jiri ịnụ ọkụ n'obi na-eche ya. Otú ọ dị, Nazca enweghị nchebe pụọ na ihe egwu niile na-eyi ya egwu. Fallkwụ ọ bụla dị na mpaghara ahụ, n'ihi ihe onwunwe na ọnọdụ ihu igwe, na-anọgide akara maka ọtụtụ puku afọ na mmebi ọ bụla mepụtara bụ nke a na-apụghị ịgbanwe agbanwe.
O di nwute, enweghi mmata banyere uche nke ebe ahu n'ime afo ndi gara aga emeela ka otutu ihe mebiri Nazca.
1 Ihe nbibi ndị emere na Nazca
2 Nkwupụta okwu banyere Nazca, gịnị sitere na ya?
3 Kedu ihe usoro Nazca na-anọchi anya ya?
Ihe nbibi ndị emere na Nazca
Ihe kachasị ọhụrụ na nke kacha emebi ha mere na Jenụwarị gara aga, mgbe onye ọkwọ ụgbọ ala sitere na ụlọ ọrụ ụgbọ njem na-abanye na Nazca Pampas n'agbanyeghị agbanyeghị ihe ịrịba ama nke dọrọ aka na ntị ma ọ bụghị ma kpatara oke mbibi. na saịtị ihe ochie na mpaghara ihe dị ka 100 mita. N'ihi nke a, ahapụla ihe omimi miri emi na ala nke metụtala mmadụ atọ n'ime puku afọ puku na-ese n'ime ájá.
O doro anya na nwoke ahụ amaghị ọnọdụ nna nna nke mpaghara ahụ wee banye Nazca Pampas n'ihi na ụgbọala ya nwere nsogbu taya. Agbanyeghị, Mịnịstrị nke Ọdịbendị nke Peru na-akọ na ọ ga-emebi mpụ na onye ọkwọ ụgbọ ahụ na nkwupụta.
Mana usoro Nazca emebilarị. Na 2014, n'oge UN UN Conference Conference nwere na Lima, ndị ọrụ si nzukọ Greenpeace batara na mpaghara ahụ, na mpaghara ebe hummingbird geoglyph dị, ha debere ọtụtụ akwụkwọ ozi buru ibu ya na ozi “Oge eruola ka ị gbanwee! Ọdịnihu ga-agbanwe. Greenpeace. " naanị site na mbara igwe. Mgbe ọgba aghara ahụ gasịrị, Greenpeace gbalịrị ịrịọ mgbaghara maka mmebi nke saịtị ahụ, bụ nke na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe.
Otu afọ mgbe e mesịrị, na Septemba 2015, otu isiokwu ruru ebe ahụ wee dee aha ya na nke geoglyphs ahụ. Nwoke a ndị uweojii na-ahụ maka ichekwa Nazca nwụchiri ya ma nyefee ya ndị ikpe.
Nkwupụta okwu banyere Nazca, gịnị sitere na ya?
Na mbu, ndi akuko ihe ochie chere na uzo ndi Nazca bu nani uzo di mfe, ma ka oge na-aga, echiche ndi ozo nwetara ikike nke kwenyere na e meputara "ebe ofufe" iji mee ka obi nke chi di elu.
Taa, anyị maara na ndị bi na Nazca kere geoglyphs site na iwepu okwute site n'elu ka e wee nwee ike ịhụ aja ọcha dị n'okpuru. Na mgbakwunye, ekele nye ọtụtụ ndị nyocha si Mahadum Yamagata dị na Japan, anyị maara na e nwere ụdị onyonyo anọ dị iche iche na-agbakọ ọnụ na ụzọ dị iche iche nwere otu ebe ahụ: obodo Inca nke Cahuachi. Taa naanị otu pyramid ka na-eguzo, mana n'oge ọ dị elu, ọ bụ ebe njem njem mbụ na isi obodo nke ọdịnala Nazca.
Dị ka ndị ọkà mmụta ihe ochie nke Japan si kwuo, ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ọdịbendị abụọ dị iche iche nwere usoro na akara ngosi dị iche iche wuru ọnụ ọgụgụ Nazca, nke a pụrụ ịhụ na geoglyphs nke na-achọpụta ụzọ si n'ógbè ha sitere na obodo Cahuachi.
Ha chọpụtakwara na eserese ahụ gbanwere n'ụzọ pụrụ iche na mpaghara kacha nso na Ndagwurugwu Nazca na ụzọ na-esi ebe ahụ aga Cahuachi. Na mpaghara ahụ enwere ụdị onyonyo dị iche, nke akọwapụtara karịa ihe niile site n'igosi ndị sitere n'okike na isi dị ka a ga - asị na ha bụ trophi. Otu ìgwè nke geoglyphs nke abụọ nke otu abụọ mepụtara nwere ike ịchọta na ugwu Nazca, ohere dị n'etiti ọdịnala abụọ ahụ.
Dabere na ndị ọkà mmụta ihe ochie Japan, ojiji nke ọnụ ọgụgụ Nazca gbanwere oge. Na mbu, ekepụtara ha maka ebum n’uche nke emume, ma emechaa debe ha n’okporo ụzọ gara Cahuachi. N'adịghị ka ụfọdụ ụfọdụ na-eche, o doro anya na ejighị ọnụ ọgụgụ ndị a akara akara njem njem, ebe ọ bụ na ọ ga-abụrịrị akara nke ọma, mana iji gosipụta echiche, na-enyekwa ya mmụọ nsọ.
Agbanyeghị, ọtụtụ ndị mmadụ anwaala ịnye azịza maka akara usoro Nazca na enwere ọtụtụ echiche gbasara mbido ha. Onye mgbakọ na mwepụ bụ María Reiche nwere mmetụta nke Paul Kosok site n’ikwupụta echiche ahụ na eserese ndị a nwere ihe mmụta mbara igwe. Ndị ọkà mmụta ihe ochie bụ Reindel na Isla egwupụtawo ihe karịrị saịtị 650 wee jisie ike nyochaa akụkọ ọdịbendị nke mepụtara eserese ndị a. Ide mmiri dị ezigbo mkpa na mpaghara ebe ọ bụ ọzara. Eserese ahụ mebere ebe ọdịnala nke ebumnuche ya ga-abụrịrị iji kwalite ịkpọku chi ndị mmiri. Ndị ọkà mmụta ihe ochie achọpụtawo ụdọ na osisi ndị ndị a ji ese ihe osise.
Kedu ihe usoro Nazca na-anọchi anya ya?
Ihe osise ndị Nazca bụ geometric na ihe atụ. N'ime otu ihe atụ anyị hụrụ anụmanụ: nnụnụ, enwe, ududo, nkịta, iguana, ngwere na agwọ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ eserese ahụ niile dị larịị ma nwee naanị ole na ole n'akụkụ ugwu. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ọgụgụ niile etinyere na ha na-anọchite anya mmadụ. Arefọdụ nwere okpu atọ ma ọ bụ anọ ndị nwere ike ịnọchi anya nku ha nke a na-eme n'isi (ụfọdụ mummies ndị Peru na-eyi ọla isi na ábụ́bà n'isi).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Peru » Enweghị mmata na-etinye Nazca n'ihe egwu
Mkpa aga ileta na Italy